Faa'iidooyinka Istaraatijiyad Suuq Weyn oo Weyn | Martech Zone
Maxaan sameynaa u baahan suuqgeynta waxyaabaha? Tani waa su'aasha ah in dad badan oo ka mid ah warshadani aysan si fiican uga jawaabin. Shirkaduhu waa inay lahaadaan istiraatiijiyad adag oo wax ku ool ah maxaa yeelay inta badan hannaanka go'aan qaadashada ee iibsiga ayaa is beddelay, mahadnaqa warbaahinta internetka, ka hor intaan rajadu waligeed gaarin taleefanka, jiirka, ama albaabka hore ee ganacsiyadayada.
Si aan saameyn ugu yeelano go'aanka iibka, waxaa lagama maarmaan ah inaan hubinno sumadeena inay jirto, waxaa naloo aqoonsaday xalka, shirkadeenana waxaa loo arkaa inay tahay hay'ad. Haddii waxyaabaha saxda ah ay joogaan waqtiga saxda ah iyo farriinta saxda ah, waxaan dhisi karnaa kalsooni hore ee wareegga iibsiga oo aan ka dhigi karnaa liiska gaaban ee shirkadaha aan kala dooran karno.
Ganacsiyada ka imanaya meelaha kala duwan ee warshadaha ee labada B2B iyo B2C arenas waxay ku tiirsan yihiin noocyo kala duwan oo noocyo ah iyo habab loo maro suuqgeynta waxyaabaha ku jira. Warbaahinta bulshada, maqaallada, joornaalada iyo baloogyada ayaa weli ku jira xeeladaha ugu sarreeya ee suuq-geynta suuq-geynta ee ay adeegsadaan ganacsiyo badan sida ku cad jaantuska kore. Noocyada kale ee mawduucyada ayaa sidoo kale kasbanaya sumcad iyo caan ka dhex ah suuqleyda oo ay ku jiraan sawirrada iyo fiidiyowga iyo kuwa kale. Jomer Gregorio, Suuq-geynta Dijital ah ee CJG
8 Faa'iido oo ay adagtahay in la iska indhatiro Suuqgeynta Mawduucyada
Suuqgeynta tusmada waxay soo saartaa waxyaabo badan taraafikada soo gala boggaaga.
Suuqgeynta waxyaabaha ayaa kordha la shaqeynta dhagaystayaasha la bartilmaameedsaday.
Suuqgeynta maareynta waxay abuurtaa horseedyo badan.
Suuqgeynta Macluumaadka kordhiyaa iibka.
Suuq geynta waxyaabaha ayaa dhismaya caan xiriirinta dabiiciga ah.
Suuq geynta ayaa dhiseysa wacyigelinta nooca.
Suuqgeynta waxyaabaha kuusoo ifbaxaya adiga ayaa ah hogaamiyaha fikirka.
Suuq geynta waa jaban ka badan noocyada dhaqameed ee suuqgeynta.
Hmmm… kan ugu dambeeya wuxuu u baahan yahay isbadal. In kasta oo suuq-geynta waxyaabaha laga yaabo inay ka qaalisan tahay mustaqbalka fog, waxay u baahan tahay xoogaa xoogaa iyo dadaal ah si loo kobciyo dhagaystayaasha aad u baahan tahay, sameysid awoodda aad rabto, iyo runti inaad bilowdo hoggaanka wadista. Kama quusan doono maalgashiyada kale ee suuq geynaya illaa inta hoggaanku socdaan!
Tags: dhagaystayaashafaa'iidooyinkafaa'iidooyinka suuq-geynta waxyaabahawacyigelinta noocadhis xiriiriyeyaalsuuq jabancjg suuqyada dhijitaalka ahContent Suuqfaa'iidooyinka suuqgeynta waxyaabahahawlgelintadhaliya raadadtaraafikada soo galajomer gregorioxiriir caan ahhogaamiyaha fikirkahogaaminta fikirkasuuq dhaqameedka